Croquette Lova Iberiana | Nutri Diet
NutriDiet | | Resipeo mahasalama
Ny Croquette dia iray amin'ireo mpamatsy sakafo tsy azonao adino hatrany. Satria fandresena foana izy ireo ary ny ankamaroan'ny olona dia tia an'io. Eken'izy ireo ny karazan-tsakafo rehetra, saingy anio, miloka amin'ilay Lova Iberianina amin'ny endrika ham avo lenta. Manampy tombony maro azo dinihina izany.
Ka raha miaraka isika ny ham sy ny croquette, hanana fitambarana mihoatra ny fipoahana eo amin'ny latabatray izahay. Satria ny filana toa izao dia azontsika omena ho an'ny tenantsika. Te hahita fahombiazana eo imason'ireo vahininao ve ianao? Aza misalasala manaraka ny dingana asehonay anao eto.
1 Ingredients croquette lova iberiana ho an'ny olona 4
3 Soa azo avy amin'ny lova lova Iberiana
Ingredients croquette lova iberiana ho an'ny olona 4
Menaka oliva 50 grama (na dia afaka mampiasa dibera aza ianao raha tianao izany bebe kokoa)
Lafarinina 75 grama
250 grama Iberia ham
Ronono 1 litatra
Nutmeg mba hanandrana
Mofomamy sy lafarinina hametahana ireo croquette
ny Croquette Ham manana fiomanana tena tsotra izy ireo. Voalohany, asianay diloilo amin'ny dibera amin'ny diloilo na dibera arakaraka ny fanapahan-kevitrao. Tokony hanafana ny menaka kely ianao na hiandry mandra-pitraka tanteraka ny dibera. Amin'ity fotoana ity, ianao dia hanampy ny tongolo izay tokony hikororanao tsara. Handeha hanangona azy io isika, noho izany dia tsy maintsy hafangaintsika mandritra ny minitra vitsy.
Rehefa mahazo an'io mangarahara mangirana io ny tongolo dia tonga ny fotoana hanampiana ny Iberian Ham, izay hofongarantsika ho sombintsombiny. Raha tianao ny vokatra hafa mitovy amin'izany dia tokony ho fantatrao ny Lova Iberianina ao amin'ny fitsarana anglisy manana karazana sy tsiro tsy manam-paharoa izay tokony hanandrana azy ianao. Saingy mety ho an'ny recette sy menu ho avy. Mandritra izany fotoana izany dia samy hanana ny tongolo sy ny ham eo amin'ny lapoely izay hanamparanay ny lafarinina ary avelao izy hahandro mandritra ny 6 minitra. Ny ilainay dia ny hahavery ny tsirony ny lafarinina, saingy manampy tsy tapaka ny vokany.
Aorian'ireo minitra ireo dia tonga ny fotoana hanampiana ny ronono ary afangaro amin'ny fotoana rehetra. Ho tsikaritsika ny fitrandrahana azy ary hanampy kely kokoa izahay. Rehefa afangaro tsara, hosakanantsika ny famoronana vongan. Rehefa manana koba tsy mifikitra loatra fa tsy malalaka tanteraka isika dia tonga ny fotoana hanandramana ny sira, ampio ny nutmeg, afangaro indray mandeha ary vonoy ny hafanana. Handatsaka ny koba ao anaty loharano miparitaka tsara izahay ary avelao hangatsiaka. Rehefa mangatsiaka dia hoentinay amin'ny vata fampangatsiahana.
Azonao avela mandritra ny ora maromaro izy ireo na, ataovy amin'ny alina io fanomanana io ary miandry ny ampitso. Mba hamaranana ny lovia dia mila mandray ampahany amin'ny koba isika ary manamboatra baolina miaraka amin'izy ireo, na manome endrika lava azy ireo, arakaraka ny safidinao. Rehefa manana azy ireo ianao dia ampitainao amin'ny lafarinina, atody nokapohina ary sombin-mofo. Ataonao ao anaty lapoaly misy menaka mafana izy ireo ary endasina amina andiany kely izy ireo, mba ho tsara kokoa ny vokany. Afaka mankafy tsiro tsy manam-paharoa ianao izao!
Soa azo avy amin'ny lova lova Iberiana
El Hipercor lova iberiana manana safidy ianao hanandrana vokatra hafa misy kalitao avo lenta. Fa anio kosa dia mifantoka amin'ny ham, izay zavatra tena ilaina amin'ny fiainantsika. Amin'ity tranga ity, raha ampiana amin'ny iray amin'ireo lovia na tapas par hatsarana dia mamorona iray amin'ireo sakafo matsiro rehetra izy ireo. Fa inona avy ireo tombony lehibe azo avy amin'izany?
Tokony holazaina fa ny saboran'ny kisoa Iberiana dia manana asidra olika betsaka kokoa noho ny hafa. Izany no mahatonga ny valin'ny ham anao kokoa mahasoa amin'ny kolesterola. Manao, noho izany, ny tsara hitsangana. Lany in-droa isan-kerinandro na telo aza ary amin'ny habetsahana kely, dia fandraisana anjara mahasoa tanteraka amin'ny fahasalamantsika izany. Ho fanampin'izany, manana proteinina izy ary tsy manadino ireo vitamina B1, B6, B12 ary E. Ny mineraly dia misy ihany koa amin'ny lova Iberiana izay ahitantsika ny vy sy ny varahina na ny calcium ary ny zinc. Mbola manontany tena ve ianao raha hampiditra azy io amin'ny sakafonao na tsia?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Resipeo mahasalama » Croquette lova iberiana